Bitdefender, fitaovana tsara indrindra hiarovana antsika Mac | Avy amin'ny mac aho
Ignatius Room | | Fampiharana hafa ho an'ny Mac, Programa Mac
Na eo aza ny zava-misy mpampiasa maro ankehitriny dia mbola tapa-kevitra fa macOS, ary OS X teo aloha, dia rafitra tsy voan'ny virus ny rafitra miasa, ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny naman'ny hafa dia nifantoka hatrany tamin'ny famolavolana fitaovana hanafika ny rafitra fiasan'i Microsoft amin'ny endriny samihafa, tsy hoe noho izy mora tohina kokoa, fa satria io no rafitra fiasa be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao.
Satria io no rafitra fiasa be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, dia lehibe kokoa ny fahafaha-mampiditra mpampiasa betsaka kokoa. Miresaka matematika daholo. Na izany aza, tato anatin'ireo taona faramparany dia matetika no fahita matetika ny fahitana ny Macs, vokatra iray izay matetika mifandraika amin'ireo mpampiasa manana fahefana mividy avo lenta noho ny vidiny, dia lasa mofomamy mahavokatra ho an'ny naman'ny hafa. Raha te hiaro ny Mac mandrakariva ianao, Bitdefender no fitaovana tsara indrindra azontsika jerena eny an-tsena.
Avy any Mac aho dia bilaogy iray izay miresaka momba ny Mac sy ny rafitra fiasan'izy ireo indrindra. Tao anatin'izay taona faramparany dia nampahafantatra anao ny mahasamihafa azy izahay olana ara-piarovana nosedraina an'ity sehatra ity, toy ny malware izay misambotra ny DNS, malware izay namboarina tamin'ny fakantsary ary naka pikantsary, olan'ny malware ao amin'ny makro Microsoft Word ary ao fampidinana app avy any ivelan'ny Mac App Store, virus iray izay nahatonga ny kapila mafy tsy misy ilana azy... ary mba mety ho tontolo andro isika, mila mikaroka ao amin'ny bilaogy fotsiny ianao. Ireo olana ara-piarovana rehetra ireo dia mampiseho fa nanjary laharam-pahamehana ho an'ny naman'ny hafa ny Mac, raha sanatria misy manana fisalasalana ary manohy miaina amin'ny fiarovana ny Mac raha ampitahaina amin'ny Windows PC.
1 Virosy, malware, trozona, ransomware
2 Inona no atolotry Bitdefender antsika?
3 Endri-javatra Bitdefender
4 Fepetra bitdefender
5 Ohatrinona ny vidin'ny Bitdefender
Virosy, malware, trozona, ransomware
Ny naman'ny hafa dia manana fitaovana betsaka hanandramana mahazo ny angon-drakitra misy anay, ao anatin'izany ny encryption ny angon-drakitra ho takalon'ny vola ara-toekarena, fantatra amin'ny anarana hoe Ransomware. Ireo karazana fanafihana ireo dia manakana ny fidirana ankoatry ny fametahana ny angon-drakitra rehetra ao anaty kapila mangirana mba hatakalo teny miafina izay tsy ho azonay raha toa ka milefitra amin'ny fanaovana blackmail izahay ary mandoa ny vola angatahin'izy ireo. Ny olana lehibe indrindra dia tsy misy manome toky antsika fa rehefa mandoa vola isika dia hiverina hahazo ny mombamomba antsika indray.
Araka ny hitanao tamin'ny teboka teo aloha, ny malware dia nanjary iray amin'ireo fitaovana ampiasain'ny hackers be indrindra, satria izy ireo no miandraikitra ny fanatanterahana asa manokana hahazoana ny angon-drakitra izay efa notehirizinay tao amin'ny solosainay, na mba handraisana an-tsoratra ny fampahalalana rehetra azonay idirana amin'ny pejin-tranonkala azo antoka mba handoavana ny fandoavam-bola ary avy eo andefaso izany any aoriana mpizara nefa tsy tsikaritray tamin'ny fotoana rehetra, raha tsy voaaro ny solosaintsika.
Virosy sy Trojan, mandritra ny taona vitsivitsy, lasa fitaovana tsy ampiasaina intsonyHatramin'ny fotoana nahasosotra ireo mpijirika sy naniry hanao ratsy amin'ny Internet dia tapitra ary ankehitriny izay tadiavin'izy ireo dia ny mahazo tombony amin'ny zava-drehetra. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny fiankinan-doha amin'ny malware sy ransomware, ankoatry ny script manokana izay afaka miditra an-tsokosoko ao amin'ny pejin-tranonkala izay natokana amin'ny fanatanterahana fifanakalozana ara-toekarena, mba handraisana an-tsoratra ny angona rehetra tafiditra, ao anatin'izany ny angona avy amin'ny trosantsika karatra
Inona no atolotry Bitdefender antsika?
Bitdefender dia manolotra antsika ho zava-baovao, raha ampitahaina amin'ny fanontana teo aloha, fiarovana multilayer amin'ny ransomware. Ny fiarovana maro sosona dia manome antsika fiarovana maromaro mba Tsy mila miahiahy amin'ny fotoana rehetra izahay momba ny angon-drakitra, rakitra na volanay. Niantso ilay fampiasa vaovao Fisie azo antoka Manolotra antsika fisorohana fisorohana amin'ny fanafihana karazana ransomware izay mikasa ny hanafina ny fampahalalana saro-pady indrindra amin'ny fitaovantsika, ho toy ny ampinga itehirizan'ny rakitra rehetra ao amin'ny solosaintsika.
Manakana izany tsy misy olona afaka manoratra na manova ireo rakitra ireo raha tsy manana alalana avy amin'ny mpampiasa izy ireo. Ho fanampin'izany, mamela antsika koa hanisy na hanala ireo rindranasa azo itokisana izay afaka miditra amin'ny angon-drakitra sy ny fisie, raha azo ampiharina. Bitdefender koa dia manolotra ny Time Machine Protection izay, miaraka amin'ny endri-javatra Safe Files, dia manome fiarovana fanampiny amin'ny ransomware. Ny Time Machine Protection dia manome antoka fa azo antoka tanteraka ny backup rehetra ataontsika satria tsy hanana fidirana amin'izy ireo ny ransomware.
Fiarovana maro sosona amin'ny ransomware, manakana ny fisie anay sy ny fampahalalana sarobidy kokoa tsy hovain'ny fampiharana ivelany.
Sakano ary esory ny doka manelingelina. Ny adware dia tsy matetika mametraka olana ara-piarovana matotra, fa manelingelina izany rehefa mizaha na mampiasa fampiharana, satria tsy mitsahatra ny mampiseho antsika ny dokambarotra amin'ny efijery feno invasif.
Tsy miadana. Bitdefender dia miavaka amin'ny tsy fanomezana antsika fahaverezan'ny fampisehoana amin'ny fotoana rehetra amin'ny solosaina, iray amin'ireo tahotra atahoran'ny mpampiasa rehefa mampiasa rindrambaiko hiarovana ny solosaina.
Manome fiarovana tsy tapaka amin'ny Bitdefender Autopilot. Ny fiarovana Bitdefender Autopilot dia miaro ny solosainantsika amin'ny fotoana rehetra rehefa mizaha na misintona atiny amin'ny Internet isika, mba tsy hisy rindram-baiko miditra amin'ny Mac amin'ny fotoana rehetra.
Arovy ny fividiananao an-tserasera. Ny script malicious dia afaka miditra an-tsokosoko ao amin'ny pejin-tranonkala anaovana ny fividianana ary ny tanjon'izy ireo dia tsy iza fa ny maka ny angon-drakitra rehetra tafiditra ao anatiny, indrindra ireo izay mifandraika amin'ny carte de crédit hahafahana mampiasa azy ireo amin'ny fividianana hosoka amin'ny Internet. Bitdefender dia tompon'andraikitra amin'ny famakafakana ireo tranokala fandoavam-bola hanarahana raha misy script amin'ity karazana ity hita.
Manapaka ny malware Mac. Malware koa dia iray amin'ireo olana lehibe sedrainay isan'andro rehefa mivezivezy amin'ny Internet isika ary io dia mitohy ho iray amin'ireo olana lehibe mety hametraka ny tsy fivadihan'ny angon-drakitra sy ny Mac amin'ny ankapobeny.
Manome serivisy hiantsoana 24/7 mifototra amin'ny rahona. Bitdefender dia manome fiarovana antsika eo noho eo amin'ny fandrahonana vaovao azo tsikaritra, noho ny teknolojia miorina amin'ny rahona izay miasa hamantatra sy hanafoanana ny fandrahonana, manome antsika fiarovana eo noho eo amin'ny sehatra manerantany.
Afaka mankafy ny tombony rehetra atolotray antsika Bitdefender ho an'ny Mac, ny fitaovantsika dia tsy maintsy mandeha amina kinova mitovy na lehibe kokoa noho ny OS X 10.9.5, manana memozy RAM 1 GB farafahakeliny ary toerana malalaka 400 MB ao amin'ny kapila mangirana. Araka ny hitantsika amin'ny fitakiana takian'ilay fangatahana, Bitdefender dia tsy hog sumber ary zara raha ho tsapantsika fa miasa any ambadika any mandra-pahatongany ny fandrahonana ary manolotra antsika ny tatitra mifanaraka amin'izany.
Ohatrinona ny vidin'ny Bitdefender
Bitdefender dia manolotra fitsarana maimaimpoana ho antsika 30 andro ahafahantsika manamarina ireo fiasa sy fiasa rehetra noresahiko tato amin'ity lahatsoratra ity. Raha vantany vao lasa ny fitsarana mandritra ny 30 andro dia hitsahatra tsy hiasa ny rindranasa raha tsy misafidy ny hividy ny fahazoan-dàlana mifanentana aminay izahay, lisansa azontsika ampiasaina amin'ny Mac 1 na 3, raha manana solosaina mihoatra ny iray ao an-tranonay na ifampiraharahana izahay. Ny vidin'ny fahazoan-dàlana isan-taona ho an'ny 1 Mac dia misy ny vidin'ny VAT 39,99 euro. Fa raha misafidy fahazoan-dàlana ho an'ny 3 Macs isika, Bitdefender dia manolotra izany ho antsika 38,99 euro ihany, iray euro mora kokoa noho ny fahazoan-dàlana ho an'ny Mac tokana.
Raha manana Mac iray ao an-tranontsika fotsiny isika dia afaka mividy ny fahazoan-dàlana ho an'ny 3 Mac eo anelanelan'ny namana telo ary araraoty ity tolotra lehibe ity, ka mora kokoa amintsika ny voaro amin'ny fotoana rehetra manoloana ny fandrahonana hita isan'andro amin'ny Internet. Bitdefender dia manolotra antsika ihany koa ny mety hividianana fahazoan-dàlana 2 na telo taona, fahazoan-dàlana izay omena vidiny ho an'ny fitaovana 3 58,49 euro ary 84,49 euro. Raha tsy manana namana miaraka amin'ny Mac isika dia afaka misafidy ny fahazoan-dàlana 2 taona amin'ny solosaina iray amin'ny 38 euro na ny fahazoan-dàlana amin'ny solosaina 99 euro. Ny vidiny rehetra dia efa misy VAT.
Lisansa Bitdefender amin'ny vidin'ny Mac
fitaovana 1 Mac Mahatratra hatramin'ny 3 Mac
Taona 1 39.99 38.99 €
2 taona 38.99 € 58.49 €
3 taona 58.49 € 84.49 €
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Bitdefender, fitaovana tsara indrindra hiarovana antsika Mac
Mahaliana… marina fa isaky ny mahazatra kokoa ny manana "data sensitive" voatahiry ao amin'ny Macs…. Hodinihiko io !!
Notsapainay ny mpandahateny Aukey SK-M36. Tsara endrika, kalitaon'ny feo ary vidiny mirary